Jaal Dheengee Huseen: Gadda Onnee nama cabsu! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsJaal Dheengee Huseen: Gadda Onnee nama cabsu!
Jaal Dheengee Huseen: Gadda Onnee nama cabsu!
Qabsa’aafi hayyuu Oromoo jaal Dheengee Huseen addunyaa tana irraa boqotee yoo dhaga’u guddoo gadde. Maan godhan akka fedhii Waaqaati. Wa herregee arge! Yaadee furmaata dhabe! Gaddaa hamaa! Yaa nuyi jedhe Haceen! Tasa nama keennaa, ka ammaaf lubbuun jiranii, jiruuf ofii ammoo sabaaf aarsaa godhanii qaabadhe. Maal goona mitiiree akki fedhii isaatii wantii martuu!
“Qabsoo Oromootiif ilmaan Oromoo qofa osoo hin tayin bineensonni bosona Oromiyaa aarsaa kaffalaniiru, kaffalas jiru” Jaal Dheengee Huseen.
Dootii namuu hin lagattuu ,tahus adiyyoomii abbaan Liiban keessa jiru waan gadda namatti daraati. Gaafa beennii wal jabeeffatus, keenna walgaadaa, wal balleessaa, warraaf maatii isaa qabsoof lakkise! Ammoo, …ayii maal jenna waan jecha dabree, biyyeen siif sablattu malee!.
Miseensa Koree Hojii Raawwachiiftuu Wajjira Alaa ABO fi Qabsaawaa waggaa dheeraa J/Dheengee Hussein har’a ganama boqotuu yeroo dhageenye guddaa rifasuu fi gadda guddaa nutti dhagama. J/Dheengee Hussein har’aa ganama dhukubaa tasaa isa mudateen akka Nairobi ti 5:00 am ykn akka L.H. sa’aa 11:00 tti addunyaa kan irraa boqotan.
“Qabsoo bilisummaa Oromoo keessaatti ilmaan Oromoo qofa adoo hin tayin bineensonni bosona Oromiyaas aarsaa kaffalaniiru, kaffalaas jiru. Hanga bosona Oromiyaafi Oromiyaan jirtu qabsoon Oromoo duubaatti hin deebiyu “jechoota jedhaniin kan yaadataman jaal Dheengee Huseen angafoota Qabsoo hidhannootii hanga hoggansa biyya alaattis Oromoof aarsaa kaffalaniidha.
Jaal Dheengeen dhibamee hospitaala Keeniyaa guddicha ‘KENYATTA HOSPITAL ‘ jedhamutti yaalamaa osoo jiranuu guyyaa hardha barraaqa addunyaa kan irraa boqatan.
Jaal Dheengeen nama silaa Ummati khun kunuunfatee akka hambaa seenaatti jabeeffachuu male ture. Jaal Dheengeen saba of kennee qabsa’aa ture. Ammoo bari hin tolchineef. Iltaamsee warraa baasee Ganna isaa cufa raasaatti qabsoo sabaaf jecha nama uf-kenne. Hardha akka hin malletti ammoo fedhii Waaqaatiin nu biraa imaltuu deebii hin qamne itti dhaabate. Maan goona silaa akkuma fedhii Waaqatti ta’ee. Nu ammoo gaafa jirru wal adamsinee du’aa walii boo’uu Aadaa tolfanne. Gosa akkan akka irraa gorte takkaa hin garre.
Jaal Dheengee Huseen seenaan isaa gadi fagoo. Seenaa isaa qofaa miti gaafa inni jiru nama seenaa Ummata Oromootii fi Seenaa Qabsoo Bilisummaa, Beekumsa akka galaanaa waraabame hin dhumanne irraa qoratani baratan ture. Haala amma jirutti gaafa inni jiruu akka qorii seenaatii wa hin gaafannee amma yoo innii nu biraa deeme achuu hin geennu!
Oromoon nama guddaa, gameessa qabsoo cimaa dhabe. AABBOO Waaqii biyyee sablissinnaafi! Jajjabaadhaa! Madhaa Maatiin, Firaa fiixaan, maatiiwwan qabsoo, jaallan qabsoo martii, ummanni Oromoo ballaan jajjabaadhaa jenna!
jaal dheengeen afrikaa kibbaatti miseensota ABO waliin bara 2020 marii taasiisaa turuun ni yaadatama.
Miseensi Koree Hojii Raawwachiiftuu Wajjira Alaa ABO fi Qabsaawaa waggaa dheeraa J/Dheengee Hussein har’a ganama boqotuu yeroo dhageenye rifasuu fi gadda guddaatu nutti dhagahame. J/Dheengee Hussein har’aa ganama dhukubaa tasaa isa mudateen akka Nairobitti sa’aa 5:00am ykn akka L.H. barii jala sa’aa 11:00 irratti boqochuu isaa odeessi nu gahe ibsina. Maatii isaaf, firoota isaa fi miseensotaaf gadda keenya ibsataa jajjabinaa hawwina.
Ibsa dhimma kana ilaaluu akkuma caalatti hubatneen miseensotaaf, qabsaawotaa fi ummataaf kan ibsamu taha.
Oduu Waxabajjii 25,2021|| Lola Boordii filannoo tii fi PP jidduu deema jiru, lola Egyp fi Ethiopia